Copper Tee, Copper kiho, Copper Assembly - Wanhua
Tee andian Fittings
varahina telo-valanoranony Tee
T endrika Tee
Y endrika Tee
Kiho serise Fittings
45 60 90 ambaratonga varahina kiho sodina Mety tsara
varahina enao manenjana
Fivoriambe serise Fittings
muffler sivana maina kokoa sivana
Fittings varahina hafa
efa lasa matotra orinasa amin'ny mpiasa 400, 4 mpanamboatra faladiany sy ny isan-taona turnover dia mikasika ny 52 tapitrisa dolara.
Ny orinasa ny fiaraha-miasa manaraka ny hevitry ny "Na firy na lehibe na kely mpanjifa dia, ny finoana sy ny fanaovana ny marina dia mandrakizay", fihaonana maka ny fepetra rehetra mpanjifa ho toy-pinoany.
Ny fahafahana ny U Bend dia mihoatra ny 20 tapitrisa isam-bolana; Ny fahafahana varahina Tee dia mihoatra ny 5 tapitrisa isam-bolana, ary ny fahafahan'ny manenjana ny tripod dia mihoatra ny 3 tapitrisa isam-bolana.
Tongasoa eto amin'ny hanontany antsika.
Tsy mitovy Size ny claw Varahina Tee
180 diplaoma U Bend sodina varahina hiverina bends fitt ...
Mety tsara varahina sodina
View rehetra Products
Henan Wanhua Electric Appliance Co., Ltd. dia avo-teknolojia izay specializes amin'ny orinasa mpanamboatra, R & D sy ny varotra varahina sodina-Fittings ny rivotra, con & vata fampangatsiahana, izay naorina tamin'ny Martsa 2017, ary hita ao Factory Atsimo ...
Air Conditioning Copper Pipe Fitting, 45 Degree Copper Pipe Fitting, Air Conditioner Copper Pipe Fittings, Copper Stainless Steel Pipe Fitting, Y Tee Copper Pipe Fitting, Compressor Copper Tube,